Ashley Young oo sharaxay sababta uu u diiday inuu ku biiro Liverpool iyo Man City, kahor inta uusan u dhaqaaqin United-ka – Gool FM
(Manchester) 10 Dis 2019. Xiddiga kooxda Manchester United ee Ashley Young ayaa ka hadlay sababta ugu weyn ee ku qasabtay inuu iska indho tiro xiisaha Liverpool si taas badelkeeda uu ugu dhaqaaqo garoonka Old Trafford.
Ashley Young ayaa qaatay go’aanka ah inuu ku biiro kooxda Manchester United suuqii kala iibsiga xagaaga ee 2011, wuxuuna tan iyo markaas u saftay Red Devils 257 kulan, wuxuuna kula guuleystay koobab badan.
34 jirkan ayaa sheegay inuu dalabyo ka helay kooxaha Liverpool iyo Manchester City intii uu ku sugnaa naadiga Aston Villa, xilligaas uu bandhig fiican ka sameynayay horyaalka Premier League.
Ashley Young ayaa wareysi uu ku bixinayay “UTD Podcast UK” wuxuu ku sheegay:
“Waxaa ila soo xiriiray wakiilkeyga wuxuuna ii cadeeyay inaan gali doono sanadkeygii ugu dambeeyay ee qandaraaska kooxda Aston Villa, isla markaana ay jiraan kooxo dhowr ah oo doonaya inay ila soo wareegaan”.
“Waxaan dalab ka helay Liverpool, waxaan la hadalnay Manchester City, kaddib Manchester United ayaa soo gashay waxaana ku iri goorma ayaan la kulmi doonaa Sir Alex Ferguson? aawayse qalinka wax lagu saxiixayo?”.
“Ma jirin meel kale aan doonayay inaan aado marka laga reebo Manchester United, taariikhda kooxda iyo ciyaartoydii halkan joogtay iyo wixii ay ku guulaysteen aniga ahaan aad ayey iila weynaayeen, United ayaa ahayd meeshii aan markasta doonayay inaan joogo”.